BAL EEG: Shaxda la filayo in tababare Sarri uu ku soo galo kulanka habeen dambe ee Tottenham – Gool FM
BAL EEG: Shaxda la filayo in tababare Sarri uu ku soo galo kulanka habeen dambe ee Tottenham
(Carabao Cup) 22 Jan 2019. Wargeyska “Daily Express” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday shaxda la filayo in uu ku soo gali doono macalinka kooxda Chelsea ee Maurizio Sarri kulanka soo aadan ay Tottenham Hotspur kula ciyaari doonaan koobka Carabao Cup.
Maurizio Sarri ayaa rajeenaya inuu dhameystiro saxiixa weeraryahanka reer Argentine ee Gonzalo Higuaín, si uu qeyb kag dhigto kulanka soo aadan ay la ciyaari doonaan Tottenham Hotspur.
Ciyaaryahanka reer Argentina Gonzalo Higuain oo haatan da’adiisu tahay 31 jir ah, ayay u badan inuu ugu biiro kooxda Chelsea si amaah ah ilaa dhamaadka xilli ciyaareedkan, laakiin Blues ayaa rajeyneysa in heshiiskan ay dhameystirto subaxnimada Arbacahada ah si kulankan uu qeyb kaga noqdo.
Kooxaha Chelsea iyo Tottenham Hotspur ayaa habeenka khamiista kulan aad u adag ku wada ciyaari doono semi-finalka koobka Carabao Cup, wuxuuna kulankan ka dhici doonaa garoonka Stamford Bridge.
Hadaba shaxda la filayo in Maurizio Sarri uu ku soo galo kulanka habeen dambe ayaa ah:
Kepa Arrizabalaga, Emerson, Christensen, Rudiger, Azpilicueta, Barkley, Kanté, Jorginho, Callum Hudson-Odoi, Hazard, Higuain.
SAWIRRO: Kevin-Prince Boateng oo Tababarkiisii ugu horreeyay la qaatay Lionel Messi iyo xarfaantiisa Cusub ee Barcelona